Shirkii ka dhacay Lancaster House ee Magaaladda London | somaliswissdiaspora.com
NEWS SOMALI UND DEUTSCH
HEESO QARAAMI AH
Shirkii ka dhacay Lancaster House ee Magaaladda London
Published on Mai 13, 2017 by admin · No Comments
Dowladda Soomaaliya ayaa heshiisyo la gashay beesha caalamka si loo dhiso ciidanka Qaranka ee Soomaaliya.
Ujeedka dar-dargelinta dhismaha ciidanka Qaranka ayaa lagu sheegay sidii ay ula dagaalami lahaayeen Al Shabaab oo hadda dagaal xooggan kula jirta Dowladda iyo AMISOM.
“Awoodaha adduunka intii ay ku sugnaayeen shirka London, waxaa ay isku raceen sidii loo taageeri lahaa loona tababari lahaa ciidanka Qaranka, si ay Police-ka ugala wareegaan AMISOM sugida ammniga dalka”, sidaasi waxaa lagu yiri heshiiska.
Shirkii ka dhacay Lancaster House ee magaalladda London, waxaa kasoo qeyb-galay in kabadan 40 wadan, kuwaas oo fursado u abuuray dalka Soomaaliya si looga baxo khilaafka soo socday sanadooyin badan.
Dhinaca kale, Xoghayaha Guud ee Qaramada Midoobay Antonio Guterres, ayaa sheegay in loo baahanyahay $900 million oo dollar oo dheeraad ah sanadkan, si loo kordhiyo kaalmada bani’aadanimadda ee dalka Soomaaliya.
„Waxaan soo bandhigay qorshaha dib loogu eegayo jawaabta bani’aadamnimada, waxaan raadineynaa $900 million oo dollar, dhamaadka sanadkan, si jawaab looga bixiyo abaaraha ku dhuftay dalka Soomaaliya”, sidaasi waxaa yiri Guterres.
Xoghayaha Guud ee Qaramada Midoobay Antonio Guterres, ayaa hadalkaasi ka sheegay shirkii ka dhacay magaalladda London ee looga hadlayay arrimaha dalka Soomaaliya.
Natiijadda abaaraha dalka Soomaaliya ee sanadkan, ayaa waxaa ay dhalisay in ay adkaato helista biyo la cabo iyo caafimaad, waxaana u dheeraa dadka abaaraha ay saameyeen cudurro ay kamid yihiin shuban biyoodka.
SAWIRO-KULANKA QAXWAHA EE SSD AY SOO QABAN QABISAY OO SI HERSARE LEH U DHAMADAY-
November, 16, 2015
Waxaa maanta oo axad ah si fiican u ...
SAWIRO- Wariya Cabdi Cajiib oo howlo shaqo u joogo magaalada hargeysa Somalilan- kana Tirsan Somaliswissradio Soona Bandhigay(Buuga cusub)
August, 2, 2015
Daawo sawirrada socdaalkii John Kerry ee Magaalada Muqdisho iyo Kulamo uu la qaatay madaxda Dalka
Mai, 5, 2015
Madaxweynaha Soomaaliya, Mudane Xasan Sheekh Maxamuud iyo ra’iisul ...
Dhageyso Somali Swiss Radio 30.10.2014, wareysi Yusuf Garaad Cumar oo kusoowajahan Switzerland, Cali Aar oo joogo Magaalada Muqdisho. wareysi Xogayaha ururka Iftin Sacdiya muxudiin iyo dood kusaabsan Qilaafka madaxda sare
Oktober, 30, 2014
Waxa lagu wareystay Yusuf Garaad Cumar oo joogo ...
Designed by MCC